Man United Oo Goolhaye David De Gea U Soo Bandhigaysa Dalab Heshiis Cusub Oo Lama Diidaan Ah Iyo Lacagta Waalida Ah Ee Uu Mushaarka U Qaadan Doono. - Gool24.Net
Man United Oo Goolhaye David De Gea U Soo Bandhigaysa Dalab Heshiis Cusub Oo Lama Diidaan Ah Iyo Lacagta Waalida Ah Ee Uu Mushaarka U Qaadan Doono.
Kooxda Manchester United ayaa goolhayaha kooxdeeda ee David De Gea ka dhigi doonta mid ka mid ah xidigaha ugu mushaarka qaalisan kubbada cagta England. Maamulka United ayaa doonaya in ay De Gea ku qanciyaan in uu Old Trafford sii joogo isla markaana uu qalinka ku duugo qandaraas cusub si meesha looga saaro hubanti la’aanta mustaqbalkiisa.
Heshiiska cusub ee ay Man United doonayso in ay ka saxiixdaan goolhaye David De Gea ayuu ku noqon doonaa xidiga labaad ee Premier League ugu mushaarka badan waxaana ka horayn doona kaliya Alexis Sanchez oo ah ciyaartoyga kubbada cagta England ugu mushaarka badan.
Qorshaha heshiiska cusub ee Man United ayaa ah mid uu De Gea ku qasbanaan doono in uu qalinka ku guugo si uu ugu danbayn mustaqbalkiisa waqtiga dheer ugu hibeeeyo Red Devils kadib markii uu waqti dheer soo socday ismari waagii heshiis kordhintiisu.
Sida uu shaaciyay wargayska Daily Mirror, Manchester United ayaa doonaysa in ay Dea Gea ka saxiixato heshiis cusub oo uu todobaadkii mushaar ahaan ugu qaadan doono £365,000 kun oo gini isaga oo sanadkiiba mushaar ahaan Old Trafford uga qaadan doono 23 milyan gini.
Heshiiska De Gea uu hadda Man United ku joogo ayaa dhacaya June 2020 kadib markii la dhaqan galiyay hal sano oo doorasho ahayd oo qayb ka ahayd heshiiskii uu saxiixay sanadkii 2015 kii markii uu sida xun ugu fashilmay qandaraaskii uu Real Madrid la gaadhay ee daqiiqadii ugu danbaysay suuqa fashilmay.
David De Gea ayaa ka mushaar badnaan doona Mesut Ozil iyo Pual Pogba oo ah xidigaha hadda Sanchez ku soo xiga wuxuuna goolhayaha reer Spain saxiixi doonaa heshiis cusub oo waqti dheer ku sii hayn doona Old Trafford.
Heshiiska cusub ee ay Man United doonayso in De Gea uu saxiixo ayaa ku kici doona £90 milyan gini waana lacag waali ah oo uu goolhayaha reer Spain ku mutaystay qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee uu United ka soo sameeyay sanadihii ugu danbeeyay.
Si kastaba ha ahaatee, Man United ayaa ugu danbayn soo xidhi doonta alabaabkii waqtiga dheer ku soo furnaa ee mustaqbalka De Gea wuxuuna hadda u muuqdaa mid sanado badan ku qaadan doona Red Devils oo uu waqti u muuqday in uu ka baxayay.